चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शंका - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
काठमाडाै‌ असोज २६
गोविन्द केसी (फाइल तस्विर)
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका विषय समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र तयार नभएपछि विधेयक पारित हुनेमा शंका उब्जिएको छ।
पटकपटक कार्यसूचिमा परेर पनि डा. केसीसँग भएको सम्झौता र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस विधेयकमा समेट्न अन्ततः कांग्रेस तयार भए पनि अन्य प्रमुख दुई दल तयार नभएको खबर दिपक दहालले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
विगतमा सत्ता साझेदार माओवादी दबाबलाई मिलाएर जाने पक्षमा देखिएको कांग्रेस पछिल्लोपटक कम्युनिष्ट गठबन्धन बनेसँगै केसीको माग समेट्ने पक्षमा उभिएको हो। शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बुधबार केसीका माग समेट्ने गरी आएका संशोधन स्वीकार गर्न सरकार तयार भएको जानकारी संसदमा गराएका छन्।
माथेमा प्रतिवेदन र आफूसँग भएका सम्झौतासमेट समेटेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख माग सहित डा. गोविन्द केसी १३ औं पटक छैटौं अनसनमा छन।
प्रकाशित २६ असोज २०७४, बिहिबार | 2017-10-12 08:47:07
मलेसियाली सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारमाथि थप कडाइ गरेको छ।
सरकारका कामको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक रायसुझाव र निर्देशन दिने संसदको विकास समितिमा तीन जना ठेकेदार सांसद छन् ।
नेपाल दूरासञ्चार प्राधिकरणले अश्लील सामग्री समावेश भएका वेभसाइट बन्द गर्न सेवाप्रदायकहरुलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन होला कि नहोला? कार्यान्वयनको...